हेमलाल र कान्छिमायालाई काठमाडौं म्याराथन | RangashalaNepal.com
नेपाली सेनाका हेमलाल श्रेष्ठ र भक्तपुरकी कान्छिमाया कोजु १२ औं संस्करणको काठमाडौं म्याराथन जितेका छन्।
हेमलालले ४२.१९ कि. मि.को दूरी २ घन्टा, २० मिनट ४५ सेकेन्डमा पुरा गर्दै स्वर्ण हात पारे । दोश्रो स्थानमा सेनाका राजन खत्री र तेश्रो स्थानमा नेपाल प्रहरीका भूमिराज राई रहे। खत्रीले २ घन्टा, २३ मिनट ३३ सेकेन्डमा र राईले २ घन्टा २४ मिनट ३१ सेकेन्डमा पुरा गरे ।
प्रोस्पोर्टस प्रा.लि.को आयोजनामा म्याराथन अन्तरगत भएको रोड रेशमा एपिएफका गोपी चन्द्र पार्कीले पहिलो स्थान प्राप्त गरे। उनले १ घन्टा ७ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । दोश्रो स्थानमा रहेका सेनाका रामजी बस्नेतले १ घन्टा २१ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । एपिएफकै सन्तोष बिक्रम बिष्टले १ घन्टा २२ सेकेन्डका साथ कास्य पाए ।
महिला तर्फ सेनाकी बिश्वरुपा बुढाले १ घन्टा १० मिनट ५७ सेकेन्डका साथ स्वर्ण पाईन् । एपिएफकी बिन्द्रा धनकेश्वरी श्रेष्ठले १ घन्टा ११ मिनट ३७ सेकेन्डका साथ रजत र एपिएफकै पुष्पा भण्डारीले १ घन्टा १२ मिनट ३५ सेकेन्डका साथ कास्य पाईन् ।
५ कि.मि. खुला दौड तर्फ पुरुमा अजित यादव र महिलाम सन्तोषी श्रेष्ठ पहिलो स्थान हात पार्न सफल भए।
अजितले १८ मिनट ११ सेकेन्डमा र सन्तोषीले २० मिनट ३७ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । पुरुष तर्फ मिलन कार्कीले रजत र जितेन्द्र दनुवारले कास्य पाए । महिला तर्फ सानु माया कार्की र फुलमती रानाले रजत र कास्य पाए । उनीहरुले नगद १० हजार ६ हजार र ४ हजार नगद सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
मास्टर तर्फको पुरुषमा धर्म महर्जन १९.५२.६३ समयका साथ स्वर्ण हात पार्न सफल भए । भिम बहादुर गुरुङ्गले रजत र कपिल भट्टले कास्य पाए । महिला तर्फ सरस्वती खड्का राईले २६:५६.६२ समयका साथ स्वर्ण हात पारिन् । दोश्रो स्थानमा निलम श्रेष्ठ रहिन् । पहिलो दोश्रो र तेश्रोले १० हजार, ६ हजार र ४ हजार पाए ।
ह्विल चेयर तर्फको प्रतिस्पर्धामा कृष्ण राज चौधरी १५ः५६.४५ समयका साथ पहिलो भए । दोश्रो स्थानमा रविन्द्र खत्री र तेश्रो स्थानमा राजेश सिल्पकार रहे । महिला तर्फ यामी झाक्री मगरले बाजी मारिन् । उनले १४:४७.६६ समयमा दुरी पुरा गरिन् । लक्ष्मी घिमिरेले रजत र हिरा तामाङ्गले कास्य पाईन् ।
बिजयी खेलाडीहरुले ५, ३ र २ हजार नगद सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे।